Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Ciidamada Dagaalka la galaya Alshabaab – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Ciidamada Dagaalka la galaya Alshabaab
Oktoobar 21, 2017 3:16 g 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya Maxamed Cabullaahi Farmaajo ayaa gaaray xarunta tababarka ciidamada ee Jasiira, halkaas oo cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ay ka wadaan diyaar garow iyo ambabax ku aaddan dagaal ka dhan ah Xarakada Al-shabaab.
Madaxweynaha ayaa dul istaagay abaabulka ay ku jiraan ciidamadu waxa uuna kula dardaarmay in ay laba laabaan dadaalka ay wadaan si ay uqaadaan duulaan ka dhan ah Al-Shabaab oo ku sugan Gobolo badan oo kamid ah Dalka.
Madaxweynaha oo meel fagaare ah kula hadlay Ciidanka isagoo xiran dharka milatariga ayaa kula dardaarmay iney dalkooda difaacaan ayna udiyaar garoobaan guluf ka dhan ah Xarakada Al-Shabaab.
“Waxa ay ogaandoonaan in shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin geesiyaal si deg deg ah uga jawaab celiya dhibaata kasta oo lagu sameeyo dadkooda. Waxaan tusinaynaa in aan diyaar u nahay in aan u hurayno nafteenna iyo maalkeena badbaadinta dadkeenna iyo dalkeenna.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo
Qaar kamid ah Ciidamada uu utagay Madaxweynaha ayaa dhankooda usheegay ineey diyaar uyihiin Fulinta amarka Madaxweynaha ee ah qaadista weeraro ka bilaabanaya Gobolka Sh.Hoose oo ah halka ugu badan ee laga soo diyaariyo qaraxyada iyo weerarada tooska ah ee Muqdisho ka dhaca.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku bogaadiyey Saraakiisha Ciidanka Xoogga abaabulka dhammaystiran ee muddada kooban ay ku sameeyeen tan iyo markii uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhan ah Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland Gaas oo Garowe lagu soo dhaweyeey
Sheeko Gaaban: Sheekada Ismadhaanto – Taxanaha 11aad